Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 31 | Page 62 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 31
ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
11.5.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 31 တွင်
1. ကြို့ထိုးရင် ဒါတွေသတိထားလိုက်ပါ (Page – 5)
2. ကမ္ဘာ့လေထု (Page – 11)
3. အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ ဇက်နာ (Page – 19)
4. နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသည့် ရောဂါအတွက် ဆေးဝါးအသစ် (Page – 19)
5. ဘေးကင်းချင်ရင် အသီးအရွက်ကိုအခွံနွှာစား (Page – 22)
6. လေပွတတ်သူများ ဖရဲသီးသတိထားစား (Page – 32)
7. ဖျားနာရတဲ့အကြောင်းရင်းများ သိထားပါ (Page – 32)
8. အစားလျော့စားလျှင် ဘ၀အရည်အသွေးပိုကောင်း (Page – 32)
ဖတ်ရှုလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ Link မှ တဆင့် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် …
ဇီဝက ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း (ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2016 ခုနှစ်)
၂၄.၂.၂၀၁၆ | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ 2016 ခုနှစ်ထုတ် ဇီဝက ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း မှ
အားကစားရုံနှင့် အရိုး၊အကြော၊ အဆစ် - ပါမောက္ခ Dr. ဦးချစ်စိုး
မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာ တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမားပါ - ပါမောက္ခ Dr. ဦးမြသိန်းဟန်
အစာအိမ်ကင်ဆာ (Stomach Cancer) - ဒေါက်တာမီမီကို(မိသားစုဆရာဝန်)...